Ringlock System ကိုထောင့်ဖြတ်ဂလားပင်လယ်အော် Brace / Clamp Brace - တရုတ် Ringlock System ကိုထောင့်ဖြတ်ဂလားပင်လယ်အော် Brace / Clamp Brace ပေးသွင်း, စက်ရုံ - FSD
ယခင်: Ringlock System ကို Hook ငြမ်းပျဉ်ပြား
နောက်တစ်ခု: Shoring ကျားကန်
ထောင့်ဖြတ်ဂလားပင်လယ်အော် Brace:ထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် Brace ringlock ငြမ်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မသန်စွမ်းပဲ FSD လှေကားထစ်စနစ်ဖြင့် တွဲဖက်. obtuse ထောင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ရထားလမ်းနှင့်ထိပ်တန်းသို့မဟုတ်လက်ကိုယ်ရံတော်သံလမ်းအဖြစ်လည်းသုံးနိုင်တယ်။
အဆိုပါထောင့်ဖြတ်အကြီးအကဲမျ​​ားသော့ခလောက်သို့မဟုတ် rivets ခြင်းအားဖြင့်ပြွန်နှင့်ဆက်နွှယ်နေသော။
Size: 48.3 * 2.5mm
အမျိုးအစားချိတ်ဆက်ပါ: Bolt က & Nut, Rivet
10'1 "x2M ထောင့်ဖြတ် Ring ကို Lock ကို (အနီးစပ်ဆုံး။ 12 '' Long က)
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် Brace 2130mm
3 '' ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဒေါင်လိုက်ထောင့်ဖြတ်-Ring ကို Lock ကို
4'x2M ထောင့်ဖြတ် Ring ကို Lock ကို (အနီးစပ်ဆုံး။ 7'8 "Long က)
4'10 "x2M ထောင့်ဖြတ် Ring ကို Lock ကို (အနီးစပ်ဆုံး။ 8'2" Long က)
5'x2M ထောင့်ဖြတ် Ring ကို Lock ကို (အနီးစပ်ဆုံး။ 8'3 "Long က)
6 '' ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဒေါင်လိုက်ထောင့်ဖြတ်-Ring ကိုသော့ခတ်
9'-2-1 /2"ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် Brace 2880 မီလီမီတာ
FSD-VDB-70 7'x2M ထောင့်ဖြတ် Ring ကို Lock ကို (အနီးစပ်ဆုံး။ 9'7 "Long က)
FSD-VDB-80 8'x2M ထောင့်ဖြတ် Ring ကို Lock ကို (အနီးစပ်ဆုံး။ 10'4 "Long က)
FSD-VDB-8X15 8'x1.5M ထောင့်ဖြတ် Ring ကို Lock ကို (အနီးစပ်ဆုံး။ 9'5 "Long က)
FSD-VDB-200 2M ဒေါင်လိုက်ထောင့်ဖြတ်က x 2M
FSD-VDB-200X150 2M ဒေါင်လိုက်ထောင့်ဖြတ်က x 1.5M
FSD-VDB-300 3M ဒေါင်လိုက်ထောင့်ဖြတ်က x 2M
ညှပ် Brace:ထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြင်ဆင်ထား modular ငြမ်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ FSD လှေကားထစ်စနစ်ဖြင့် တွဲဖက်. obtuse ထောင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ရထားလမ်းနှင့်ထိပ်တန်းသို့မဟုတ်လက်ကိုယ်ရံတော်သံလမ်းအဖြစ်လည်းသုံးနိုင်တယ်။ မသန်စွမ်းပဲ Clamp အငြမ်း၏ဒေါင်လိုက်အဖွဲ့ဝင်အပေါ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရန်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်တွဲဖို့ပိုပြီးစွမ်းဆောင်ရည်များလည်းပေးပါ။
ချိန်ညှိ Clamp Brace5''
ချိန်ညှိ Clamp Brace7''
ချိန်ညှိ Clamp Brace 8 ''
ချိန်ညှိ Clamp Brace 10 ''
၏အသေးစိတျထောင့်ဖြတ်ဂလားပင်လယ်အော် Brace / Clamp Brace
တပ်ဆင်ခြင်းထောင့်ဖြတ်ဂလားပင်လယ်အော် Brace / Clamp Brace
ringlock စနစ်ကခြေထောက်နဲ့ Lock ကို
လှေကား & ကွင်းပိတ်